श्रीमतिलाई श्रीमानले आँखै अगाडि हात बाधेर तेल तताएर टाउकोबाट यस्तो गरेपछि… (भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमतिलाई श्रीमानले आँखै अगाडि हात बाधेर तेल तताएर टाउकोबाट यस्तो गरेपछि… (भिडियो हेर्नुहोस)
श्रीमान र श्रीमती बीच झगडा भएन भने त्यो सम्बन्ध के सम्बन्ध ? तर यसको अर्थ बलियो श्रीमानले कमजोर श्रीमतिलाई हाथ बाधेर तेल तताएर टाउको बाट खनाउनु होइन । मानवता हराउँदै गएको कुरा गरिरहंदा धादिंगमा आफ्नै श्रीमतीलाई हातखुट्टा बाँधेर यस्तै गरेका छन श्रीमान र सासुले । के हिजोआज हाम्रो समाजमा मानवता हराएकै हो त ?
धादिंगको निलगण्डक नगरपालिका को ११ मा २० वर्षिय पुजा परियारलाई उनकै श्रीमानले सामान्य कुरामै यस्तो सम्म गरेका हुन । पुजाले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा अस्पतालसम्म बुुझ्न आएका वडाध्यक्षलाई रुँदै सासुले पनि श्रीमानलाई साथ दिएको बताईन् । उहाँले छोरालाई रोक्नु भएन ।